Taariikhda My Butros » RUNTA Fool saabsan Dating casriga ah
Last updated: Oct. 16 2020 | 2 min akhri
Aan ay wajahayaan, waxaan mar dambe ugu noolaan in ol wanaagsan’ maalmood oo jacayl la arko marka hore u beddelmi courtship taas oo keentay in faraxsan a, guurka dheer. Iyadoo horumarka of technology, wax cabsi ah ka go'antahay, iyo heerka sarreeya ee gaalnimo,, shukaansi casriga ah ma fududa. Kuwa ku dhashay qarnigii 20aad, waxaan si gaar ah u ogaadaan oo kaliya sida shukaansi dhib noqon kara.
Qofka dan yar awood u leeyahay in xiriirka oo dhan oo ninna ma uu doonayo in uu noqon mid ka mid ah kuwaas oo uu leeyahay xiiso badan, sababtoo ah in kaliya waa mid aad u nugul. Maxaa yeelay, innagu ma doonayo in aan ka muuqan sidoo kale dooneysa, waxaan u muuqdaan in ay qaataan saacadood ama mararka qaarkood maalmo si ay dib ugu dirayo. Kuwani kulan nafsiyeed ma yihiin madadaalo u ah qof.
Wicitaanada Phone waa nooc ka mid tahay dhimanayaan. Isgaarsiinta Inta badan maalmahan dhacaya marayo fariimaha qoraalka ah kuwaas oo dhab ahaantii waa nooca ugu dheehanyahay ee isgaarsiinta.
Qorshaynta ka hor iyo dejinta taariikhaha u egtahay inay marna dhici. Thanks to warbaahinta bulshada, danaha kale ka taataabtay, iyo saaxiibada, taariikhaha waxa ay noqon muruqgelin dheeraad ah ee xilligan ka badan si taxdir leh loo qorsheeyey baxay.
Erayo sida “aynu nafisto” iyo “doonayaa in aan joognaa” waa code for “aynu ku xidhaysaa mafaatiix”. Oo intii naxdin baa ugu qaadan fariimahan, ay marar badan ay yihiin sida ugu caansan inay yeedhi qof in uu waqti maalmahan.
Dadka qaarkood ma raadinayaan xiriir, kaliya ay doonayaan inay ku xidhaysaa mafaatiix. Nasiib darro, inta badan waqtiga kama uu sheegay in ilaa iyo ka dib xaqiiqda ah. Maalmahan, si daacad ah waxaa aad u dhif ah loo isticmaalo.
Dad badan ayaa ka baqayo go'an tahay taas oo horseedaysa “aan la hadlo uun” xiriirka. Ma kaliya khadadka isku dari this, xidhiidhada waxay u badan yahiin marnaba la soo dhaafay. Xiriirka calaamad-bilaash ah, kuwaas marar badan ku dhamaadaan hal qof qish laakiin tan iyo xiriirka rasmiga ah marna ahaa markaas qish ah “marna dhacay”.
Warbaahinta bulshada waxaa ka buuxa damacaas iyo fursadaha dhumiyaa. Fariimaha gaarka ah iyo daahsoon shukaansi sida ka jeelahay sawir dhab ahaan kordhinaysaa fursadaha ee qish. Warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa fursadaha si aad u aragto oo kale ayaa jirta, ma aha sida kaliya inuu sii joogo la xiriirto qoyskaaga iyo saaxiibadaa ah. Social Media sidoo kale loo isticmaalaa in lagu muujiyo dareen. Updates Status iyo posted sawirro ku saabsan jacaylka, halka aan aad si toos ah u carrabaabay, waa hab cusub oo lagu cabirayo kuwa’ dareen run.
Nasiib darro, maalmahaan waxaa aad u adag in la arko qofka kale si buuxda u unfiltered. Guud ahaan, dadka uga baqaan in ay noqon dhab ah oo isu soo baxay halkaas dhigo xitaa in xiriirka. Tani waxay fikradiisa la cabsi waa sababtoo ah ma doonayo in aan ka muuqan sidii aad u heli, aad u walaacsan, sidoo kale dorky, aad u fiican, aad u nabdoon, ma funny ku filan, iwm. Waxa aan dhammaan u baahan tahay in la ogaado waa in marka aad helin qofka kugu habboon, ay ku qabsan doontaa dhammaan dhinacyada idinka mid ah.
Ugu dambayn, Qof kasta oo aad ka heli jaceyl midkood doonto ahaanshaha lammaanaha noloshaada ama ugu danbeyn aad jebiso doonaa – labada xaqiiqada kuwan waxaa argagax. Inkasta oo shukaansi casriga ah ma fudud yahay, waa u qalantaa in dhamaadka. Waayo, markii aynu samayn hesho qof in gaar ah, waxaan u muuqdaan in ay ku qarisaan naftiina oo dhan in ka badan sida socodka lagu helo jacaylka runta ah mar walba waa u qalantaa.